Isitolo Sezomthetho se-Hemp Organic Shop uDkt Buds Genova
Uhlelo oluqhubekayo: 10: 00-20: 00
Shopping - Natura
Isitolo sezomthetho i-Hemp ne-Biological Hemp Shop "UDkt Buds" - uGenoa
Hemp kusuka ezitshalweni eziphilayo futhi ezingabekezeleli.
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-44)
I-hemp yezomthetho isuselwe kwi Izilimo eziphilayo ukusetshenziswa kwezokungcebeleka nakuzo izindatshana eziningi eziklanyelwe ukufeza izidingo nezifiso ezahlukahlukene: yilokhu okunikezayo "UDkt Buds", igcwele ngokuphelele Isitolo seHemp a IGenoa ezikhethekile emikhiqizweni esekwe emzimbeni I-CBD hemp kanye nenqubo ebanzi ye abantu abangabekezeleli.
Isitolo sezomthetho i-Hemp neHemp Nemikhiqizo ye-Organic: Siyakwamukela ku- "Dr Buds" eGenoa
I-hemp yezomthetho evela Izilimo eziphilayo e Isitolo seHemp ngakho konke okuhle ICanapa anganikela. Lokhu UDkt Buds. Imikhiqizo etholakala ku-Isitolo seHemp "UDkt Buds"isukela emkhakheni we-gastronomic kuya emkhakheni we-Wellness, ngaphandle kokunganaki izinto zokungcebeleka. At"UDkt Buds" Isitolo se-Organic Hemp eqinisweni kungenzeka ukuthola imikhiqizo eminingi yokudla esekwe i-hemp yezomthetho okufana: i-pasta, amabhisikidi, ubhiya, ushokoledi, ama-liqueurs, amaswidi, amaswidi kanye namaswidi. Into esebenzayo ekhona kule mikhiqizo I-Cannabidiolo-I-CBD, eyaziwa ngezakhiwo zayo eziningi ezizuzayo emzimbeni.
Isitolo se-Biology Hemp Shop "UDkt Buds" - uHemp ngazo zonke izinhlobo zawo eGenoa
L'Isitolo seHemp UDkt Buds isebenza ngokukhethekile ekuthengisweni kwemikhiqizo equkethe i- i-cannabidiol, isithako esisebenzayo se insangu, enemiphumela ukuphumula, ama-antioxidants, ama-anti-immune kukhuthaza ukulala futhi kuyaphumula ngokumelene nokukhathazeka nokwethuka. Ngakho-ke imelela umgomo ofanele wokunikeza impumuzo, ukulwa nengcindezi yansuku zonke, ukuthuthukisa imizwa futhi uphumule.
I-hemp esemthethweni evela ezitshalweni eziphilayo kanye nemikhiqizo eminingi yabantu abangabekezeleli
Isitolo seHemp sibongwa kakhulu ngekhwalithi ye-assortment, UDkt Buds unikeza Genoa izindatshana ezintsha kakhulu ezihlobene nomhlaba I-hemp yezomthetho futhi iphakamisa nezinye izinto eziwela esigabeni okuthiwa se Izidakamizwa ezihlakaniphile. Zonke izinto ezitholakala endaweni yokudlela ziwumphumela Ukulima okuphathelene nezinto eziphilayo futhi zilungele abantu abangabekezeleli. Ngakho-ke wonke umuntu angaya esitolo ephephile.
I-Hemp Kwezimonyo zemvelo
La ICanapa kuyaziswa ngezinzuzo zayo eziningi kusimo somuntu nomuntu kanye nenhlala-kahle yakhe. Kepha inezinye izici eziningi ezithokozisayo ezenza kube isithako esihle kakhulu futhi umkhiqizo wezimonyo. AtIsitolo seHemp UDkt Buds uzothola okhilimu, okugcotshwayo namafutha okugcoba. Nabo konke kwe imvelaphi yezinto eziphilayo. Ngaphezu kwalokho, ukubaluleka okuhlukanisa umsebenzi kubo bonke abanye futhi kwenza isitolo sihluke ngohlobo lwalo, ngokuqinisekile ukuba khona kwemikhiqizo nakho kubantu ukungabekezeleli. Ngakho-ke ufuna ukuzama ICanapa ukuphumula, ukusetshenziselwa ukuzijabulisa, ukulwa nengcindezi noma ukunakekela ukubukeka kwakho, UDkt Buds nakanjani inokuthile ekwenzela kona.
Ikheli: I-Via Galata, 49R
I-POSTAL CODE: 16121
Umakhala ekhukhwini: 393 2250934
Instagram: Silandele kusuka lapha
Inombolo ye-VAT: 02547880993